स्ववियु निर्वाचन : कहाँ को विजयी ? (सूचि सहित) - SangaloKhabar
स्ववियु निर्वाचन : कहाँ को विजयी ? (सूचि सहित)
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक तथा सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसमा बुधबार भएको स्ववियु निर्वाचनको परिणाम धमाधम आइरहेको छ । त्रिविका ठूला र आंगिक क्याम्पसमा विभिन्न संगठनका अवरोधले निर्वाचन हुन नसके पनि तुलनात्मक रूपमा कम विद्यार्थी भएका क्याम्पसको परिणाम आइरहेको छ । बुधबार राति १२ बजेसम्मको परिणामअनुसार कांग्रेसनिकट नेविसंघले ८४ क्याम्पसमा अध्यक्ष जितेको महामन्त्री सरोज थापाले दाबी गरे । त्यस्तै एमालेनिकट अनेरास्ववियुले ८० क्याम्पसमा अध्यक्ष जितेको प्रवक्ता सुदीप शर्माले बताए । त्यस्तै माओवादी केन्द्रनिकट अखिल क्रान्तिकारीका प्रवक्ता सुरेन्द्र बस्नेतका अनुसार उनको संगठनले ४३ क्याम्पस जितेको छ । उपत्यकाका तीन आंगिक क्याम्पसको परिणाम सार्वजनिक हुँदा तीन ठूला संगठनले एक–एक क्याम्पस जितेका छन् । पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा अखिल क्रान्तिकारी, जनप्रशासनमा नेविसंघ र महाराजगञ्ज नर्सिङ क्याम्पसमा अनेरास्ववियु बिजयी भएका छन् ।
३६ हिले क्याम्पस, धनकुटा, ः नईन्द्र बहादुर राई
यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण १९, २०७३ समय: ७:५५:०७